I-Tweetbot ibuyekezelwa enguqulweni engu-2.0.1 ku-Mac | Ngivela kwa-mac
I-Tweetbot ye-Mac ivuselelwa manje ikuvumela ukuthi ucaphune amaTweets futhi wakhe imilayezo eqondile emide
UMiguel Angel Juncos | | Apple, Mac App Store, I-Mac OS X, Izaziso, Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
Muva nje, unjiniyela Tapbots wethule i-so inguqulo ekudala ilindelwe engu-2.0 ye-Tweetbot ye-Mac, ibeka iklayenti le-Twitter elihle kakhulu ku-OS X ngokude. Manje kuza izindaba zokuthi ibuyekezelwe enguqulweni engu-2.0.1 ngokusekelwa ngefomethi entsha ukucaphuna ama-tweets kanye nethuba lokuthumela imilayezo emide eqondile yezinhlamvu ezifika ku-10.000, uma umsebenzi ususebenze ku-Twitter.
I-Tweetbot ngaphezu kokunikezwa izikhathi eziningana njengohlelo lokusebenza olubalulekile, inokuthokozisa ukusekelwa kwama-akhawunti amaningi nohlu. Ibuye ibe nezihlungi ezithuthukile, amafomethi wokubuka amaningi wekholamu nezinye izici eziningi ezenza ukuthi iphelele kunakho konke ngokufaneleka kwayo.
Izici ezijwayelekile zohlelo lokusebenza zibhalwe ngezansi:
Idizayinelwe i-OS X: I-Tweetbot izizwa ihlanganiswe ngokuphelele ku-Yosemite enesixhumi esibonakalayo esincane, ukugqwayiza okuhlukile nokusekelwa kokukhonjiswa kweRetina ngaphezu kwesikhungo sezaziso.
Amakholomu amaningi namawindi: Inikeza ithuba lokuvula usesho olulondoloziwe, uhlu, ukubalula, izingxoxo ngemiyalezo eqondile nokuningi, kumakholomu ahlukile noma amawindi ukuze ungalokothi uphuthelwe i-tweet futhi.
Izihlungi ezizothuliswa: AmaTweets ongafuni ukuwabona angafihlwa isikhathi esithile noma ingunaphakade. Umuntu noma umsebenzisi wabelwe ukuthi uyisimungulu, kungenziwa futhi ngama-hashtag noma ama-tweets ngamagama angukhiye (kufaka phakathi izinkulumo ezijwayelekile).
Ukuvumelanisa phakathi kwamadivayisi: Usebenzisa i-Tweetbot ku-iOS, umugqa wakho wesikhathi, isimo sakho esingafundiwe, nezihlungi eziyizimungulu kuzohlala kuzivumelanisa ngokuzenzakalela ukuze ukwazi ukuqhubeka lapho ugcine khona kumadivayisi wonkana.
Ukusekelwa komuntu wesithathu: I-Tweetbot isekela kancane, i-CloudApp, i-Droplr, img.ly, i-Instapaper, i-Mobypicture, i-Bulletin board, i-Pocket, i-Readbility ne-yfrog
Kufaka ini lokhu kubuyekezwa okusha?
Ukusekela quote Tweets ngesitayela esisha
Ukusekelwa kwemiyalezo emide eqondile (Izonikwa amandla yi-Twitter kungekudala).
Fixed bug lapho kubhalwa @mentions ewindini lokwakheka.
Kulungiswe iphutha lapho kulayishwa isithombe esikhombisa uhlangothi esisha.
Isivinini esithuthukisiwe phakathi kwezinguquko ze-akhawunti.
Ezinye izinto eziningi ezilungisa amaphutha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » I-Tweetbot ye-Mac ivuselelwa manje ikuvumela ukuthi ucaphune amaTweets futhi wakhe imilayezo eqondile emide
Thola ukuthi ngabe iMac yakho izokwazi yini ukusebenzisa i-Metal ku-OS X El Capitan
Ungaliguqula kanjani ibhokisi le-Apple Watch yakho libe ibhokisi leshaja-lobucwebe